नोबेल अस्पतालको के चाला यो ?
नर्भिक अस्पतालमा बालिका मारिइन् । नर्भिककै औषधि विक्रीमा खोट भेटियो र सरकारले छानबिन गर्न पर्ने अवस्था पनि आयो । यसैवीच विराटनगरको नोबेल अस्पतालका डाक्टरको लापरवाहीले एक महिला अपाङ्ग बनेको भन्दै पीडित पक्षले कानुनी कारवाही र क्षतिपूर्ति मागेका छन् । आखिर अस्पतालहरुमा खेलाँची हुनु भनेको नियमन र निगरानी कमजोर हुनुले हो । सरकारको नीति असफल भएर यस्ता घटना घट्ने हुन् । सरकारले कडाइका साथ नियमन गरेको भए अस्पतालहरु जिम्मेवार हुनेथिए, अस्पतालहरु बढी व्यापारिक हुनु भनेको जनस्वास्थ्यप्रति खेलाँची बढेर जानु हो । यहीकारण विराटनगरको नोबेल अस्पतालले एक महिलालाई अपाङ्ग बनाइदियो, देशका अन्य भागहरुमा पनि डाक्टरका कमजोरीले गर्दा जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने र नागरिकको जीवन जोखिममा पर्ने घटना बढेका छन् ।
घटनाअनुसार विराटनगर–१४ का पवन शाहले आफ्नी श्रीमति सञ्जुलाई अस्पताल लगे । उपचारमा संलग्न चिकित्सकको लापरबाहीले उनी अपाङ्ग बनिन् । घटनाको छानबिन गरी कारबाहीसहित क्षतिपूर्तिको माग गरेर पवन शाहले पत्रकार सम्मेलन गरेर नोबेलमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले नि:शुल्क प्रसुति हुने आशामा अस्पताल भर्ना गराएँ, तर उपचारमा लापरबाही हुँदा २२ दिनमै बच्चाको मृत्यु भयो । सामान्य अवस्थामै भर्ना गराएको भएपनि नोबेलले विभिन्न बहानामा ४ पटक शल्यक्रिया गराएको र दुई महिनापछि उपचार पूरा नभइ डिस्चार्ज गरेको र यस्तो लापरवाही गर्न पाइन्छ ? उनको गुनासो थियो ।
उनले आफ्नी श्रीमतीलाई अस्पतालले उपचार पूरा नभइ बीचमै डिस्र्चाज गरेपछि अहिले मर्नु न बाच्नुको अवस्थामा घरमै राख्नु परेको बताए । उनका अनुसार बच्चा जन्माउन गरिएको शल्यक्रियापछि आमाको दाहिनेतर्फको कम्मर मुनिको भाग चल्न छाडेको थियो । यस्तो अवस्थामा डिस्चार्ज किन गरियो ?
शाहले अढाई महिना श्रीमतीलाई अस्पतालमा राख्दा दैनिक १० हजार बढी खर्च भएको भौचर देखाउँछन् । उपचारमा त्रुटी, कमजोर नभएको दावी गर्दै ४ लाख उपचार खर्च मिनाह गरेको अस्पतालको दावी रहेको छ । एउटा १० रुपैयाँको सिरिन्जसमेत किन्न लगाउने अस्पतालले ४ लाख मिनाह किन गर्‍यो ? दालमे कुछ काला है भनेझैं आफ्नो त्रुटी नभए अस्पतालले यसरी कुनै बिरामीलाई उपचार खर्चमा मिनाह दिने गर्दैन् ? नोबेल अस्पतालप्रति ठूलै जनाक्रोस बढेर गएको छ ।